भोली भदौ १५ गतेबाट स्कूल खुल्दै.. – List Khabar
Home / समाचार / भोली भदौ १५ गतेबाट स्कूल खुल्दै..
भोली भदौ १५ गतेबाट स्कूल खुल्दै..
admin4weeks ago समाचार Leaveacomment 377 Views
१४ भदौ । लामो समय देखि बन्द रहेको उपत्यकाका केहि विद्यालय भोली भदौ १५ बाट खुल्ने भएको छ । काठमाडौं गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले आज सोमबार एक विज्ञप्तीमार्फत स्वास्थ्य मापदण्डको पुर्ण पालना गरी विद्यालय खोल्न लागेको जनाएको हो । सम्बन्धित निकायहरुसँगको छलफलपछि विद्यालय संचालन गर्ने सहमति भएको समेत विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । यदि तोकिएको
मापदण्ड पालना नभए कारवाही गर्न समेत विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको ‌‌‌छ। खुःसी साथ जीवयापन गर्ने चाहना सबैको हुन्छ । हाम्रो जीवनको एक महत्वपूर्ण कुरा भनेको खुसी हो । जब हामी खुःसी हुन्छौ तब हामीले गरेको कामले सफलता पाउँछ ।घरलाई खुःसी सुन्दर, र प्रिय बनाउनको लागी आफूले गर्न सक्ने प्रयासको साथमा वास्तु शास्त्रमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।
वास्तुदोषको कारणले घरमा नकारात्मक उर्जा जान्छ । यस्ता उर्जालाई हटाउनाको लागी घरको प्रवेश द्धारमा यस्ता कुरा राख्नुपर्दछ ।
१. सबैभन्दा पहिले त घरको मेन गेटलाई विशेष रुपमा ध्यान दिनुपर्दछ । गेटको गाडी एउटा ठुलो ऐना राख्नाले घरमा छिर्ने मान्छेको पूरा प्रतिबिम्ब ऐना पर्नेकारणले कोहि नकारात्मका उर्जा लिएर आएको छ भने त्यस्तो उर्जालाई ऐनाले फकाईदिन्छ ।२. घरको मुल द्धारमा मुद्रा भएको हनुमानको मूर्ति वा तस्विर दक्षिणदिशा तर्फ लगाउँदा मुलद्धारमा कुनै वास्तुदोष छ भने त्यस्तो दोष काटिन्छ । त्यस्तै यस्ता दोष हटाउनको लागी मुलद्धारमा पन्चधातुको पिरामिड लगाउन पनि सकिन्छ ।
३. घरमा नकारात्मक उर्जा नछिरोस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ, नकारात्मक उर्जा नछिराउँनको लागी घरको मुख्य द्धारमा घण्टी झुण्डाएर राखेमा नकारात्मक उर्जा छिदैन् ।४.वास्तुशास्त्रको दोष हटाउनको लागी घरमा तुलसीको बोट रोप्नु एकदमै राम्रो मानिन्छ । घरमा तुलसीको बिरुवा रोपेर साझमा दैनिक रुपमा दीप बाल्नाले वास्तुदोष मेटिन्छ ।५ वास्तुशास्त्रको अनुसार घरको मुल गेट खोल्ने बित्तिकै भयाङ् देखिनुलाई अशुभ मानिन्छ । यदि तपाईको घरमा पनि भयाङ् देखिन्छ, भने पर्दा लगाएर नदेख्ने बनाउनुहोस् ।
६. घरवरीपरी दुबो उम्रेको छ भने एकदमै राम्रो मानिन्छ । यसरी उम्रेको दुबोमा गणेशको प्रतिमा चढाएमा वास्तुको दोष भाग्दछ ।७. घरलाई सुख, शान्तीमय र प्रिय बनाउनको लागी घरको उत्तरी भागमा धातुबाट बनेको कछुवाको प्रतिमा राख्ने र मुख्य द्धारमा क्रिस्टल बल झुण्डाएर रातो रंगको फित्ता पनि बाध्नेगर्नुपर्दछ ।८.मुल प्रवेश द्धारमा आफ्नो सामथ्र्यअनुसार रंगौली बनाउनु शुभ मानिन्छ । यस्तो रंगौलीले लक्ष्मी मातालाई आर्कषित गरी धनसम्पत्ती पनि भित्रनेछ।
Previous ग’ र्भ रोक्न को लागि नयाँ तरिका , यो निकै प्रभाबकारी भएको डाक्टर को दाबी ।
Next किन विमान कर्मचारीहरु प्रायः महिलाहरु हुन्छन् ? यसको पछाडि यस्तो छ रोचक कारण ।